भ्वाईस अफ नेपालको टप १२ मा पुगेकी पोखराकी रजनी, जो आफ्ना श्रीमान छोडेर संगीतमा लागिन ! « Etajakhabar
भ्वाईस अफ नेपालको टप १२ मा पुगेकी पोखराकी रजनी, जो आफ्ना श्रीमान छोडेर संगीतमा लागिन !
प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलवार २३:१६
पोखरा ।“साट्न आउनु धम्पुसमा हिमाल जस्तो जोवन” “रुपै राम्रो रुपातालको ” यीनै गीतहरु त्यतिबेला चर्चामा थिए । यी गाउको चिनारी दिनेगीतहरु मध्य सबैभन्दा धेरै सुनिने गीतमा पर्दछन् र यसमा आवाज भरेकी थिइन रजनी रिदम राईले । उनलाई गाउको गीतकी गायिकाको उपमा पनि दिइन्छ । आज भन्दा १० वर्ष अघि दार्जलिङबाट पोखरा आएकी रजनीको वास्तविक नाम रजनी राई हो । रिदम उनले पछि मात्र थपेकी हुन् । सानैदेखि सँगीतप्रेमी भएकाले आफ्नो नामको बीचमा रिदम राख्न मन लागेको उनले बताइन् । उसो त उनको १० वर्षको छोरीको नाम पनि रिदमनै हो । दार्जलिङ स्थायी घर भएकी रजनी संगीतकर्मकै लागि पोखरा आएकी थिइन् । आफ्नो पुर्व श्रीमान राम्रो संगीतकर्मी भएको र दुवैलाई घरपरिवारबाट पनि साथ मिलेका कारण उनीहरु पोखरा हानिएका थिए ।
काम गर्दै जाँदा जीवनमा त्यस्ता केही ठेस पनि लाग्छ । जुन ठेस रजनीको जीवनमा पनि लाग्यो । पहिलेको श्रीमान र आफुबीच केही कुरामा असमझदारी भएपश्चात उनीहरु दुवैले छुट्टिने निर्णय गरे । रजनीले पोखरानै रोजिन् भने उनका पहिलेका श्रीमानले दार्जलिङ रोजे ।
अहिले रजनीका पुर्व श्रीमान् दार्जलिङ छन् । छोरी रिदम पनि बाबाकै साथमा भएको रजनीले बताइन् । रजनीलाई सबैभन्दा धेरै छोरीको माया लाग्छ । दुवैको सहमतिमानै छोरी उता भएको उनले सुनाइन् । “मलाई छोरीको माया नलागेर मैले छोरीलाई उता पठाएकी होइन् ।” उनले भनिन् – “छोरीका कारण जिन्दगीमा अगाडि बढ्ने क्षमता मिलिरहेको छ, अहिले पनि म दार्जलिङ जाँदा छोरीलाई भेट्छु ।”
दार्जलिङका थुप्रै कलाकारहरु अहिले पनि नेपाली गीत संगीतका कारण चर्चामा छन् । उसो त उनीहरु आफुलाई भारतीय भन्दा पनि बढी नेपालीनै भन्न रुचाउँछन् । हिन्दी भन्दा अत्याधिक नेपाली भाषानै बोल्ने गर्छन् ।
निरन्तर मेहनत र परिश्रमका कारण आफु आज यो स्थानमा रहेको गायिका रजनी रिदम राईले बताइन् ।
नेपालका थुप्रै स्टेज कार्यक्रमहरुमा उनले आफ्नो प्रस्तुती राखेकी छिन् । बिम्ब कवि प्राज्ञ रमेश श्रेष्ठको शब्दमा कन्दरा ब्याण्डका संगीतकार सुनिल थापाको संगीत रहेको गीत “रुपै राम्रो रुपातालको माथि भिरचोक गाउँ” ले रजनीलाई चिनायो ।
उनका रुचाइएका गीत मध्ये “साट्न आउनु धम्पुसमा, निलगिरीको काखैमा” हुन् । गुरुङ चलचित्रका गीतमा पनि रजनीको पाश्र्व आवाज सुन्न पाईन्छ । पोखरामै रहेर रजनी अहिले पनि संगीतकर्म सँगै शैक्षिक पेशामा लागेकी छिन् ।
“छोरी साथ नहुँदा केही समय म डिप्रेसनमा समेत परेँ ।” उनले भनिन् – “तर फेरि छोरीकै कारण बल मिल्यो ।”
रजनी छोरीको सपना पुरा गर्न अहिले नेपालमा भइरहेको दोस्रो संस्करणको गायन रियालिटी शो दि भ्वाईस अफ नेपालमा गएकी छिन् । “छोरीले आफ्नो साथीहरुलाई आमाको आवाज टेलिभिजनको पर्दामार्फत देखाउन र सुनाउन चाहेको हुँदा म उक्त रियालिटी शोमा सहभागी भएकी हुँ ।”— रजनीले भनिन् ।
दि भ्वाईसको ब्लाईन्ड अडिसनबाट उनी छनोट भएर दिप श्रेष्ठको टिममा प्रवेश गरेकी छिन् । ब्लाईन्ड अडिसनमा उनले “पुरानो हुँदैन माया” गीत प्रस्तुत गरेकी थिइन् । दि भ्वाईसको आशावादी गायक गायिका मध्ये रजनी पनि कम छैनन् । उनको लामो समयको संगीतप्रतिको लगावले आशा गर्न सकिन्छ यस पटकको पनि दि भ्वाईस को उपाधी पोखराले चुम्नेछ ।
पहिलो संस्करणको दि भ्वाईस अफ नेपालबाट पोखराका सिडी विजय अधिकारी विजयी भएका थिए । अहिलेको दि भ्वाईसमा कोचहरु दिप श्रेष्ठ सँगै प्रमोद खरेल, राजु लामा र आस्था राउत रहेका छन् ।
नेपालगञ्जमा सेना परिचालन, हिँडडुल गर्न पनि नपाईने
२५ श्रावण २०७७, आईतवार १२:४१